အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အချဉ်ပေါက်ခြင်း
ခုတလော ဘလောခ်လောက မှာ လူတွေလူတွေ ဘိုင်ပိုလာ ဖြစ်တာပိုများလာသလိုပဲ (ဘလောခ်စပေါ့ မဂ္ဂဇင်းမှာ မောင်မျိုး ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့နားထောင်နေသည်။ တော်သေးတယ် ဘိုင်ပိုလာဆိုတာ ဘာလဲမမေးလို့ဟု တီချမ်းမှ အင်တာဗျူးဖြေနေရင်းတွေးသည်။ ကိုယ်က ကြားဖူးနားဝနဲ့ဆော်လိုက်တာ စကားတလုံး ဘာပဲပြောပြောလူအထင်ကြီးတာပေါ့) ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ခါတိုင်းအချစ်အကြောင်းဘာအကြောင်းရေးနေတဲ့လူကလဲ ဘလိုင်းကြီး ထပြီး နိုင်ငံရေးအကြောင်းရေးလိုရေး။ ပွဲဆူအောင် လုပ်တာပေါ့လေ။ ဟော ခုတလော ဘလောခ် လောကမှာ ခွေးရူးတွေလဲ တော်တော် ပေါလာတယ် စည်ပင်က အမဲတုံးမပစ်တော့ တွေ့ကရာလူတွေကိုလိုက်ကိုက်တာပေါ့။ အဲ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘလောခ်တွေကိုလဲသွားပြီး အယုတ်တ အနတ္တတွေကိုနှမချင်းမစာနာ ရေးတဲ့ ယောက်ျားဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေ (အဲ့လူ တွေက ယောက်ျားဘလောခ်ဂါတွေဆီကျတော့ သွားမရေးရဲဘူးလို့ ဆိုတဲ့သူတွေကဆိုတယ် သူတို့ကို... xxx ... လုပ်လိုက်မှာကြောက်လို့တဲ့လေ) တရားပဲကျရသေးတော့နော်၊ နောက်တခါ သူတို့ကို သူတို့ ဘလောခ်ဂါဝေဖန်ရေးဆိုတဲ့ တကျွန်းပြန်လိုလို အမှောင်ကမ္ဘာ ဘက်တော် သားလိုလို လူတန်းစားတရပ်လဲပေါ်ထွန်းလာသေးသတဲ့။ ဟောတချို့များဆိုရင် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ဘာညာရေးရတာ အားမရလို့ ဘလောခ်တောင်ဖွင့်ပြီး ပါဆင်နယ်လီး အတက်ခ် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာအထိတောင်လုပ်ကြသေး) မိန်းမမို့မိန်းမလိုမိန်မရ လုပ်ရင်ထားပါတော့ တချို့ယောက်ျားရင့်မာကြီးတွေကလဲ ဒါမျိုး လုပ်တတ်တယ်နော်၊ ဟင်းဟင်း နောက်ဆို တီတို့အတွက်တောင် ထမိန်တွေ စကပ်တွေရှားလာဖွယ်မြင်တယ်။ ဟောခုတခါ ကျတော့ နောက်ဆုံးပေါ်ပဲ တီတွေ့တာ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ဖဲ့တယ် ဘာညာ ဆိုပြီးတော့ လူတကာ မကောင်းကြောင်းတွေအလှည့်ကျရေးကြတယ်။ နောက်တမျိုးတဘာသာကလဲ ရှိသမျှလူတွေကို သနားအောင် ပတ်ချွဲနပ်ချွဲတွေပြော။ ရှိသမျှလူတကာ ချစ်ချစ် ချစ်တဲ့ ကိုကို မောင်မောင် ကိုကို မောင်မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်ချစ် စသဖြင့် ချစ်ချစ်ချင်း မွှန်အောင်ခေါ် အဲ့လို ထွေထူးအံ့ရာသော် ဆိုတဲ့ လူတွေလဲရှိကြသေးတယ်လေ။ မြန်မာ့ဂီတ လောကနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြရရင် ရဲလေးလိုပေါ့လေ (စကားချပ်)။ နောက်ဆုံးတော့လဲ လူတွေကိုပဲ လိုက်ကိုက်ကိုက်၊ သူငယ်ချင်းကိုပဲဖဲ့ဖဲ့၊ နိုင်ငံရေး ရေးပြီးတော့ပဲ ပွဲဆူအောင်လုပ်လုပ်၊ ငြင်းငြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဘလောခ်ဖွင့်ပြီးတော့ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေဆော်ဆော် ပတ်ချွဲနပ်ချွဲလုပ်ပြီးရေးရေး၊ အားလုံးက ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ လုပ်ပြီး နောက်ဆုံးမတော့ နာမည်ကြီးချင်တာပါပဲ
တေဇာ December 10, 2009 at 3:51 AM
စကားမစပ် တီချမ်းရေ... တလောတုန်းကမှ.. (လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလလောက်) အိန္ဒိယမှာလည်း... ဟိုမိုကရေစီ အေးချမ်းစွာ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရေးတင်းကြပ်မှု ထိုက်တန်သလောက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာတောင်မှပေါ့နော်...။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဒီမိုကရေစီကတော့ (လက်ဝါးကြီးအုပ်ဒီမိုပဲပြောပြော) အပေါ့အငန်အတော်လေးပေါ့နော်...။ မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ တော်တော်ကြိုးစားရယူရဦးမယ် ထင်တာပဲ။ သူများကို ၀ဋ်နာကံနာလို့ထင်နေတဲ့ ၀ဋ်နာကံနာသမားတွေလည်း ရှိသကိုး...။
တီချမ်းအင်တာဗျူး ဖတ်သွားတယ်... ခစ်ခစ်...။
အန်တီချမ်း December 10, 2009 at 5:05 AM
10 Dec 09, 05:01
mamagyi: good idea chan
အန်တီချမ်း December 10, 2009 at 5:06 AM
အင်းတေဇာ ဟုတ်တယ် ပီနယ်ကုတ်အကြောင်းမှလား
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တီက marriage ကိုစိတ်မဝင်စားတာ
နောက်မှ ကြုံရင် အရှည်ရေးမယ်
အန်တီချမ်း December 10, 2009 at 5:07 AM
Rita December 10, 2009 at 9:19 AM
အော် ကဗျာ အဟောင်းတပုဒ် ပြန်တင်ဖို့ ရှိနေတာကိုပဲ တင်လို့ မဖြစ်သေးတဲ့ ဘဝပါလား။ ငါ့နှယ်... ၁ ရက်နေ့တည်းက တင်ဖို့ဟာကို နေ့ရွှေ့ရက်ရွှေ့လုပ်နေတာနဲ့ပဲ.. ခုတော့ ကွေးသောလက် မဆန့်ခင် တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
(ဘာမှ မဆိုင်တာ ပြောသွားတာ။)
ရီရတယ်။ ရီချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရုံးမှာရောက်နေလို့ တိတ်တိတ်လေး ရီရတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ်က နိုင်ငံရေး တင်တာ မဟုတ်ဘူး။ လာငြိနေတော့ လာငြင်းကြရော။ ဆရာသမား(တွေ)ကလည်း ဦးဦးဖျားဖျား လာထောက်ခံထား(ကြ)တာကိုး။ လာငြင်းကြတာနဲ့ ကိုယ်ကလဲ ပြောစရာ ရှိနေတာတွေနဲ့ စိတ်ပါတာနဲ့ ပြန်ပြောမိတာ။ ဆက်စပ်နေတာကြောင့်လဲ ပါတာပေါ့။
အန်တီချမ်း December 10, 2009 at 12:30 PM
Bino December 10, 2009 at 10:34 PM
Difference people difference ideas.
But I am staying right way as I think.
Honest is my best policy.
mgnge December 11, 2009 at 7:03 PM
အခု ဒီဟာက Comment မှာရေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူး..။ အသိ အမှတ်ပြုတာ.. ။
လူတစ်ကိုယ်စိတ် တစ်မျိုးဆိုတော့ .. သူ့ စိတ်ကိုယ့် စိတ်ဘယ် ညီမလဲ နော့..။
သူ့ကိုမကြည့်လို့ လည်း မရသလို ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ပေ့ါ ။
အယ် .. အမှားတွေ့ တိုင်းတော့ မဝေဖန်နဲ့ ပေ့ါ.။ စိတ် ဆင်းရဲ မှာဆိုးလို့ ပြောတာ ။
အခု ဒီစာကို ရီရတယ်လို့ တော့မထင်ဘူး..။ တီ့စိတ်ထဲ အချဉ်ပေါက်လို့ အပင် ပေါက်လာတို့ ပဲထင်တယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ကိုယ့်ဘလော့ ကိုယ့် နေရာမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရေးခွင့်ရှိတယ် ...။
(မှတ်ချက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဘာကောင်မှမဟုတ်တဲ့ အတွက်..အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ပြောလို့ ဟားစရာဖြစ်ရင်တော့ ခွင့်လွှတ် ဗျ)
အန်တီချမ်း December 11, 2009 at 7:52 PM
ဒါပေမယ့် မျှော်နေတဲ့ပရိတ်သတ်လဲရှိသေးတယ်လေ နော့